Wararka Tamarta iyo sheekooyinka ee Calietc.com - Alietc.com
Kaalinta Petrochemicals ee Nolol Maalmeedka
Wax soo saarka Petrochemicals: Kuwani waa wax soo saarka kiimikada ee laga soo qaatay batroolka iyada oo la sifeynayo. Isku darka kiimikada ee batroolka ayaa sidoo kale laga qaadaa shidaalka kale ee hadhaaga ah, sida dhuxusha ama gaaska dabiiciga, ama ilaha dib loo cusbooneysiin karo sida galleyda, miraha timirta, ama sonkorta. Saliidaha saliida waxay soosaaraan olefins iyagoo dareeraya kalluunka kalluunka. Dhirta kiimikada ayaa soo saarta […]Read More
Nidaamka Tamarta Qoraxda_ Ilaha Korantada Ka Fiican
Tamarta Qoraxda: Waa isha lagama maarmaanka u ah tamarta la cusboonaysiin karo. Teknoolojiyadaheeda waxaa si guud loogu qeexay inay yihiin qoraxda ay saameeyeen ama qoraxda daran, waxay kuxirantahay sida ay uqabtaan una qeybiyaan tamarta qoraxda ama ugu badalaan awooda qoraxda. Farsamooyinka qoraxda ee firfircoon waxay isku daraan nidaamyada sawir-qaadista, tamarta qorraxda oo xoog leh, iyo kuleylka biyaha qoraxda si looga faa'iideysto tamarta. Deggan […]Read More
Diesel oil_ Isha Ilaha Kale ee Tamarta
Waa maxay shidaalka naaftada? Shidaalka Diesel waa shidaal dareere ah oo loo isticmaalo matoorada naaftada ah, oo gubashadiisa shidaalku dhaco, iyada oo aan lahayn dhimbiil u sabab ah isku-darka hawo-mareenka soo galaya oo markaa la shidayo shidaalka. Mashiinnada naaftada waxay heleen adeegsi ballaaran iyadoo ay ugu wacan tahay waxtarka heer-kuleedka weyn iyo, sidaas darteed, waxtarka shidaalka. Waa maxay shidaalka naaftada? […]Read More
Gaaska Dabiiciga_Qofka Cusboonaysiinta ee Tamarta
Waa maxay gaaska dabiiciga? Gaaska dabiiciga waa dabiici iskudarsamaya gaaska hydrocarbon asal ahaan ka kooban methane. Badanaa waxay ku lug leedahay qadar kala duwan oo ah alkanesyada muhiimka ah, iyo mararka qaarkood qaddar yar oo kaarboon dioxide, nitrogen, hydrogen sulphide, ama helium ah. Gaaska Dabiiciga waa hydrocarbon-aan la cusboonaysiin karin oo loo isticmaalo kayd tamar oo ah kululaynta, karinta, […]Read More
Xawaaraha Qoryaha_ Isha Kale ee Shidaalka
Xawaaraha alwaax: Caleemaha qoryaha ayaa ah nooca ugu caansan ee shidaalka pellet. Badanaa waxaa laga sameeyaa balka la soo ururiyey iyo qasaaraha warshadaha ee la xiriira shiidaalka alwaaxda, soosaarida alaabada alwaaxa iyo qalabka guryaha, iyo dhismaha. Ilaha kale ee qashinka warshadaha waxay isku daraan rucubyo miro ah oo faaruq ah, qolofta qolofta timirta, qolofka qumbaha, iyo treetops iyo laamo daadsan inta lagu gudajiray […]Read More
Wax Walboo Aad Dooneyso inaad Ka Ogaato Shidaalka Biodiesel
Bio naaftada: Biodiesel waa nooc ka mid ah shidaalka naaftada ee laga soo saaro dhirta ama xayawaanka waxayna ka kooban tahay silsilado dhaadheer oo saliid dheer leh. Caadi ahaan waxaa lagu sameeyaa iyadoo kiimiko ahaan u shaqeysa lipids sida dufanka xoolaha, saliidda soybean, ama saliidda kale ee khamriga leh, soo saarista methyl, ethyl, ama propyl ester. Si ka duwan khudradda iyo saliidaha qashinka loo isticmaalo […]Read More
Dhammaan wixii ku saabsan dhuxusha _ soo saarista, noocyada & isticmaalka
Dhuxusha: Dhuxulku waa qashin fudud oo kaarboon madow ah oo ay soo saarto qoryaha si firfircoon u kululeeya si looga wada saaro dhammaan biyaha iyo qaybaha kale ee firfircoon. Nooca caadiga ah ee hawshan pyrolysis-ka ah, oo loo yaqaan dhuxusha, gubashada dhuxusha, kuleylka waxaa lagu bixiyaa iyadoo la gubayo qayb ka mid ah maaddada ugu horreysa lafteeda, iyadoo aan la helin ku filan oksijiin. Dhuxusha ayaa sidoo kale la soo saari karaa […]Read More
Abuurka Korantada_ Soosaarka & Wararkii Ugu Dambeeyay
Soosaarka korantada: Soo saarista korantadu waa habka loo soo saaro awoodda korantada ee laga helo ilaha tamarta lagama maarmaanka ah. Faa'iidooyinka ku jira warshadaha tamarta korontada, waa marxaladda ka hor intaan loo gudbin dadka isticmaala dhamaadka ama keydinta. Tayada korantada ayaa ah in si xor ah aan loo heli karin qadar badan, sidaa darteed waa in la “soo saaraa” (taasi waa, […]Read More
Dhuxul: Waa isha qaaliga ah ee dhalinta tamarta
Waa maxay dhuxul dhagaxu? Dhuxul waa dhagax madow oo guban kara oo loo sameeyay lakabyo dhagax ah oo loo yaqaan dhuxulada dhuxusha. Shidaalku inta badan waa kaarboon leh qadar aan xasilloonayn oo ka kooban qaybo kale; ugu horreyn haydarojiin, baaruud, oksijiin, iyo nitrogen. Dhuxul dhagaxa ayaa la sameeyaa marka walaxda dhirta dhimatay isu bedesho peat oo isu beddesho shidaal kulaylka iyo cadaadiska […]Read More
Aruuriyaha Cadceeda_Waa Hab Wanaagsan Oo Loo Abuuro Korantada
Soolar aruuriyaha: Aaladaha qorraxda aruuriya waa makiinad soo aruurisa kana ururisa shucaaca qoraxda qorraxda. Mashiinadan ayaa inta badan loo isticmaalaa kuleylka qoraxda ee firfircoon waxayna u oggolaadaan diirimaadka biyaha ee shaqsi ahaaneed. Kuwa wax soo ururiyaa waxay caadi ahaan ku dhegan yihiin saqafka waana inay ahaadaan kuwo aad u adag sida loo sheegay […]Read More